VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI : Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD
Namoaka ny vokatra vonjimaika feno ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny sabotsy teo. 18 juin 2019
Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD, manaraka azy ireo kandidà avy amin’ny tsy miankina ary ny kandidàn’ny antoko Tim no teo amin’ny laharana fahatelo.
Voahajan’ny Céni ny fe-potoana omen’ny lalàna azy ireo hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika feno. Dimy ambin’ny folo andro aorian’ny naharaisana farany ny fitanana an-tsoratra tena izy avy amin’ireo birao fandatsaham-bato no omen’ny lalàna azy ireo.
Tamin’ny 2 jona lasa teo no naharay ny fitanana an-tsoratra farany avy any Analalava ny Céni ary notapahiny fa ny datin’ny 15 jona no hanaovana ny fanambaràna ny vokatra vonjimaika ofisialy. Tontosa tamim-pirahalahiana tanteraka ny lanonana tetsy amin’ny foiben-toeran’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana etsy Alarobia ny sabotsy maraina lasa teo. Ireo kandidà avy amin’ny vovonana Isika Distrika miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina na ny IRD no nahazo ny maro an’isa indrindra tamin’ny vokatra vonjimaika izay navoakan’ny Céni. Toerana miisa 84 manerana ny Nosy no azon’izy ireo, izany hoe mihoatra ny an-tsasamanilan’ny toerana ho an’ireo solombavambahoaka eny amin’ny Antenimieram-pirenena.
Nanaraka azy ireo kandidà nilatsaka tamin’ ny tenany manokana izay nahazo toerana miisa 46 ary tsy nisy afa-tsy toerana miisa 16 kosa no azon’ireo kandidà avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara ary ireo dimy ny toerana azon’ireo kandidà avy amin’ny antoko hafa. Niaiky ny teo anivon’ny Céni fa nisy tokoa ny tsy fahatomombanana nandritra iny fifidianana solombavambahoaka izay notanterahina ny 27 mey lasa teo iny. Nanamafy ny filohany, Hery Rakotomanana fa tena latsaka ambany dia ambany ny taham-pandraisan’anjaran’ireo mpifidy raha mihoatra amin’ny fifidianana teo aloha. Tsy afa-tsy 40,71% monja izany. Tao anatin’ny Distrikan’Antananarivo fahaefatra no tena nahitana ny taha ambany indrindra ary tany amin’ny Distrikan’i Belo Androy kosa no ambony indrindra.
Mora ny hanatanterahan’ny Filoha ny velirano 13
Notsipihin’ny Filohan’ny Céni fa zava-dehibe ny fananganana ny Antemierampirenena izay mariky ny fisiana tany demokratika aloha voalohany indrindra ary handinika sy hampandany ireo lalàna ilaina eto amin’ny firenena. Mahakasika ity farany manokana dia ho tombony lehibe amin’ny fahamaroan’isan’ireo kandidà miara-dia amin’ny fitondram-panjakana eny Tsimbazaza ny fanamorana ny fandaniana ireo lalàna izay mifanaraka amin’ny fomba fijerin’ny fitondrana. Isany ohatra ny hirosoana na tsia amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka izay hoentina hanafoanana ny Antenimierandoholona. Hanamora ihany koa ny fanatanterahan’ny Filoha ireo velirano nifanaovany tamin’ny vahoaka Malagasy.
Ankoatr’ireo dia kandidà tsy miankina maro ihany koa no nilaza sahady ny fahavononany amin’ny fanohanana ny fitondram-panjakana rehefa tonga eny Tsimbazaza. Mbola vokatra vonjimaika ihany anefa iny navoakan’ny Céni iny fa ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana irery ihany no tena tompon-teny farany. Andrasana afaka 15 andro ny hamoahany ny vokatra tena ofisialy.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (193) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (133) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (122) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (114) 20 janvier 2020 Mpampianatra 500 mahery nahazo fifanarahana arak’asa FANABEAZAM-PIRENENA (96) 20 janvier 2020